Akụkọ - Gini bu ihe eji eme aru aru?
Mkpokọta ọgwụ na-abụkarị usoro atọ (nke a na-ekweghị), nke a na-eji akwa abụọ nke spunbonded non-kpara akwa ejiri maka ọgwụgwọ na ahụike, na-agbakwunye otu oyi akwa n'etiti etiti abụọ ahụ, nke emere nke ngwọta sprayed na-abụghị kpara akwa na ihe karịrị 99,999% filtration na mgbochi nje site ultrasonic ịgbado ọkụ.
Ugbo elu ato nke nkpuchi ogwu: nkpuchi di iche na ihe nkpuchi nkpuchi (ihe eji eme ihe na-achoghi ya) + nkpuchi nke ozo (gbazee otutu ihe na-achoghi) + ihe nkpuchi mmiri di n'ime (nke a na-achoghi ya).
Cheta na: gbazee fụrụ ndị na-abụghị kpara akwa bụ n'ozuzu 20 grams
Spunbonded non-kpara akwa (elu oyi akwa): non kpara akwa bụ a na-abụghị kpara akwa, nke na-emi esịnede emep uta eri, ikwu na akwa akwa.
Uru: ventilashion, filtration, mmiri absorption, waterproof, ezigbo njikwa, adụ, ọkụ
Ọghọm: enweghị ike ihicha
Ngwọta ịgba ndị na-abụghị kpara akwa (n'etiti oyi akwa): a ihe onwunwe bụ ụkpụrụ nke na-akpa iche bacteria. Ihe bụ isi bụ polypropylene, nke bụ ụdị akwa-akwa electrostatic fiber akwa, nke nwere ike weghara ájá (ụmụ irighiri mmiri nke nwere oyi baa ga-abụ electrostatic adsorbed n'elu akwa na-abụghị kpara mgbe ha dị nso gbazee fụrụ ndị na-abụghị - akwa akwa, nke enweghị ike ịbanye).
Spunbonded non-kpara fabric (n'ime): non woven fabric is dependent to textile fabric, that is, non-kpara fabric, nke mejupụtara eriri.